မိခင်နို့ထွက်ဖို့ . . .
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကလေးမွေးတာနဲ့ မိခင်နို့မထွက်မှာစိုးလို့ပါ။ မိခင်နို့ထွက်အောင် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ A. ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း စွပ်ပြုတ်ရည်ကို တစ်နေ့ခြောက်ခွက်လောက် သောက်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီး ၁၀၀ မှာ ၉၀ ဦးလောက်က မိခင်နို့ထွက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...